Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Dhamaadka sanadkan, in ka badan 80% dadka waaweyn ee Mareykanka ah waxay yeelan doonaan taleefan casri ah. Qalabka moobiilku wuxuu xukumaa labada B2B iyo B2C muuqaalkooduna wuxuu ku badan yahay suuq geynta. Wax kasta oo aan hadda sameyno waxay leeyihiin qayb mobilo ah oo ay tahay inaan ku darno xeeladaha suuqgeynta. Waa maxay Suuqgeynta Suuqgeynta Suuqgeynta moobiilku waa ku suuqgeynta ama aaladda mobilada, sida telefoonka casriga ah. Suuqgeynta moobiilku waxay macaamiisha siin kartaa waqti iyo goob
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Ma jiraan wax run ahaantii i niyad jabiya sida markii aan furo e-mayl aan rajeynayo oo ku saabsan aaladda gacanta oo aanan akhrin karin. Ama sawiradu waa balac adag oo calaamadeysan oo aan ka jawaabi doonin muujinta, ama qoraalka waa mid aad u balaaran oo aan ku qasbanahay inaan gadaal iyo gadaal u sii maro si aan u aqriyo. Ilaa ay xasaasi tahay mooyee, ma sugayo inaan ku laabto miiskeyga oo aan akhriyo. Waan tirtirayaa.